सेनाहरुका लागि मुलुकको स्वाधीनता भन्दा ठूलो राजनीतिक दलहरू « Pariwartan Khabar
सेनाहरुका लागि मुलुकको स्वाधीनता भन्दा ठूलो राजनीतिक दलहरू
29 April, 2020 6:53 pm
१७ बैशाख २०७७, हेटौंडा/ राकेश कुमार शर्मा
बाहिरी मुलुकहरुमा सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अस्मिता भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन ? तर नेपालमा सेनाहरु पनि राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता र सदस्य भए जस्तो छ नी ?
कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र स्वास्थ्य सामग्रीको चोरी गर्न नछाड्ने हरुले अरु समयमा मुलुकसँग गद्दार गर्न के बाँकी राख्लान ?
बाहिरी मुलुकमा सेनाहरु मुलुकको स्वाधीनता प्रति मात्र जिम्मेवार हुन्छन । विक्रम सम्वत २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकालीन बाट चल्दै आइरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा पर्दा पनि सेनाहरुको आस्था दलहरू प्रति मात्र देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा लुटनका लागी गणतन्त्र ल्याइएको हो ।
सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डता भन्दा ठुलो र प्यारो राजनीतिक दलहरूका नेताहरू होइन र ? कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकमा संकट परेको बेला मुलुक भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र सत्ता परिवर्तनको खेल भइ रहँदा पनि सेनाहरु चुप छन ।
अब सेनाहरुले जंगी अड्डा, पृतना, गण र गुल्म हरुको नाम परिवर्तन गरि नेकपा पृतना, कांग्रेस पृतना, माओवादी पृतना, राजपा पृतना, माले पृतना, राप्रपा गण, साझा गण, विवेकशील गण, बाममोर्चा गुल्म र मजदुर किसान गुल्म आदि आदि जस्ता नामकरण गरे हुन्छ ।
सर्वसाधारण हरुलाई मात्र लकडाउन छ । नेताहरूलाई खुमलटार, कोटेश्वर, भैसेपाटी र बालुवाटार आदि आदि जस्ता यत्रतत्र जान आउन छुट छ हैन र ?